जिल्ला समाचार : सिन्धुली
Saturday, 11 July 2020 10:51 am, Nepal
सिन्धुली, २ वैशाख : बिपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीमा पर्ने सडकखण्डको दायाँबायाँ २५/२५ मिटरबाट १५/१५ मिटर बनाइने भएको छ । कमलामाई नगर कार्यपालिकाको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये बिपी राजमार्गको क्षेत्राधिकार घटाउने निर्णय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता कर्ण घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
मेचीकाली : 2018-03-13 11:33:04
सिन्धुली, २९ फागुन : बिपी राजमार्गमा ट्रक पल्टँदा आज बिहानैदेखि राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–६ चैनपुरमा खण्डमा इँटा लादिएको ट्रक पल्टिएपछि राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । गए राति नै बा५ख ३३४७ नंको ट्रक पल्टिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय सिन्धुलीले जनाएका छ ।
मेचीकाली : 2018-02-01 17:30:24
सिन्धुली, १८ माघ : गत २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिन्धुलीमा धेरैको घर भत्किए पनि प्राधिकरणले यहाँका भूकम्पपीडितको गुनासो अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः सर्वेक्षण गरी भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्ने बताए पनि भूकम्पपीडितका घरमा छुट तथा पुनः सर्वेक्षण नै नगरी इन्जिनियर फिर्ता बोलाइएको छ ।
मेचीकाली : 2018-01-27 13:48:46
सिन्धुली, १३ माघ : सिन्धुलीमा हावाबाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका– १ मा अहिले हावाबाट सफल रुपमा विद्युत् उत्पादन गरिएको हो । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा अहिले हावा र सौर्य प्रणालीले गाँउलाई उज्यालो बनाइरहेका छन् । यसलाई चिसापानी वायु तथा सौर्य मिश्रित मिनि ग्रिण्ड परियोजना नाम दिइएको छ । यसबाट ३५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका वातावरणीय अधिकृत सन्दिप उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
मेचीकाली : 2017-12-10 11:07:25
सिन्धुली, २४ मंसिर : सिन्धुलीका दुवै क्षेत्रमा वाम गठबन्धन विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १ मा वाम गठबन्धन, नेकपा (एमाले)का गणेशकुमार पहाडी र २ मा (माओवादी केन्द्र)का गजुरेल विजयी हुनुभएको हो । नेपाली काँग्रेसका प्रेमचन्द्र दाहाललाई १० हजार १४० मतान्तर पार्दै पहाडी विजयी हुनुभएको हो । यस्तै गजुरेल नेपाली काँग्रेसका नरेन्द्रजंग थापालाई १२ हजार ५२ मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो ।पहाडीले ३२ हजार ५२९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दाहालले २२ हजार ३८९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । निर्वाचित पहाडी विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सिन्धुली क्षेत्र नं १ बाट विजयी हुनुभएको थियो ।
सिन्धुलीमा भयानक दुर्घटना, ४१ जनाको मात्रै मृत्यु भएको पुष्टि
लामो कपाल पाल्ने होसियार !
यौनसम्पर्कपछि दिदीको हत्या !
खुर्कोट–नेपालथोक सडकखण्ड निर्माण सुरु
सिन्धुलीको दुर्घटना : अट्ठाइसजनाको सनाखत
बस दुर्घटनामा १२ यात्रुको मृत्यु
३० प्रतिशत जुनार बढी उत्पादन हुने
सिन्धुलीमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
उपयोगबिहीन सिन्धुलीका जडिबुटी
अबैध खयर त्यतिकै छाडियो
खुर्कोट-घुर्मी सडकको ट्रयाक खुल्यो
सिन्धुली कांग्रेसमा बराल सभापति
अन्तिम विद्रोहको तयारीमा माओवादी
दुर्घटनामा छोरो परेको आशङ्कामा आमाद्वारा विष सेवन गरी आत्महत्या
दिदि नाता पर्नेको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई २७ बर्ष कैद सजाय
बिपी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध
आमालाई कुटपिट गर्ने एकिकृत माओवादीका राज्य समिति सदस्य श्रेष्ठ पार्टीबाट निष्काशित
दुम्जामा मिनिट्रक दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु